Gmail account တစ်ခုအတွက် Recovery Email နဲ့ Recovery Phone number တို့ပာာ အရေးကြီးပါသလား ??? - Software Guide
Home / ဗဟုသုတ နည်းပညာ / Gmail account တစ်ခုအတွက် Recovery Email နဲ့ Recovery Phone number တို့ပာာ အရေးကြီးပါသလား ???
Gmail account တစ်ခုအတွက် Recovery Email နဲ့ Recovery Phone number တို့ပာာ အရေးကြီးပါသလား ??? Reviewed by Ko Lin on 10:26:00 AM Rating: 5
Gmail account တစ်ခုအတွက် Recovery Email နဲ့ Recovery Phone number တို့ပာာ အရေးကြီးပါသလား ???
Ko Lin 10:26:00 AM ဗဟုသုတ နည်းပညာ
ကျတော်တို့ Social Network ပေါ်မှာ Gmail account တစ်ခုကို နေရာမျိူးစုံမှာအသုံးပြုနေကြပါတယ်။ Gmail account တစ်ခုပာာ
နေရာမျိူးစုံမှာ အသုံးဝင်လှပါတယ်။ Website မျိူးစုံမှာ Sign-in ပြုလုပ်ဖို့အတွက်က Gmail account တစ်ခုတော့လိုစမြဲပါ။
Gmail account မလိုတာဆိုလို့အရမ်းကိုရှားပါးလွန်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျတော်တို့နေ့စဉ်အသုံးပြုနေတဲ့ Social Network အပေါ်မှာ
Gmail account တစ်ခုပာာတကယ်ကိုအရေးပါလှတယ် ဆိုတာကိုလူတိုင်းသိရှိပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။ Gmail account တစ်ခုကိုအသစ်ပြုလုပ်
ရတာအရမ်းကိုလွယ်ကူပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျတော်တို့ဒီ Gmail account တစ်ခုကို အမြဲတမ်းအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက်တော့ လူတိုင်းအတွက်
မလွယ်ကူလှပါဘူး။ ဘာကြောင့်မလွယ်ကူဘူးလို့ဆိုရလဲ ဆိုရင်တော့ အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ Social Network အသုံးပြုမှု့ပေါ်မူတည်ပြီး
ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Gmail account တစ်ခုနဲ့ Facebook account တစ်ခု Sign-up ပြုလုပ်ကြပြီဆိုပါတော့ … အစပိုင်းအသုံးပြုပြုခြင်း
အဆင်ပြေနေသေးတော့ ဒီ account လေးနဲ့ပဲအသုံးပြုကြတာပေါ့။ နောက်ပိုင်း Facebook ကနေ security တွေလုပ်လာပြီး account ကို
စီစစ်လာရင်တော့ ဒီ account ကိုအလွယ်တကူပဲ ပစ်ထားလိုက်ပြီး နောက်ထပ်အသစ်တစ်ခု ရယူကြပါတယ်။ ဒီအချိန်ကျရင် Gmail account တစ်ခုပာာလဲ အလွယ်တကူပစ်ထားလိုက်တော့ပါတယ်။ အမှန်တကယ်တော့ Gmail account တစ်ခုကိုဒီလိုတစ်ခုထဲအတွက်နဲ့ မပစ်ထားသင့်ပါဘူး။
Gmail account နဲ့ ကျတော်တို့ အခြား account မျိူးစုံကို Sign-up ပြုလုပ်ရန်သုံးလို့ရပါသေးတယ်။ တစ်ချို့လဲမသိကြသလို တစ်ချို့ကတော့ဒါကိုသိကြပါတယ်။ ဒီလိုနေရာတိုင်းအတွက်အသုံးဝင်လှတဲ့ Gmail account တစ်ခုကိုအမြဲတမ်းအသုံးပြုနေကြပြီဆိုပါတော့ တစ်ခါတစ်လေအသုံးပြုရင်းနဲ့Password Change မိတာတို့ Password မှားသွားပြီး အကြောင်းအမျိူးမျိူးကြောင့် မမှတ်မိတော့တဲ့အခြေအနေမှာ ဒီ Gmail account တစ်ခုပာာကိုယ့်အတွက် အရမ်းကိုအရေးကြီးနေပြီဆိုရင်တော့ သင့်အတွက်အခက်ကြုံရပါပြီ။ အဲလိုအခြေအနေဆိုရင် ကျတော်တို့ Password ကို Reset ချရတော့ပါမယ်။ အဲလိုအခြေအနေမှာ အရေးကြီးတာကတော့ Gmail account ကိုစစဦးဆုံးဖွင့်တဲ့အချိန်မှာ Recovery အနေနဲ့ပေးထားတဲ့ Email address နဲ့ Phone Number တို့ပါပဲ။ အဲလိုအခြေအနေမှာ Reset ပြုလုပ်နိုင်အောင် Gmail Team ကနေပြီးသင့်ဆီကို Verify ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် သင်ပေးထားတဲ့ Recovery Email ( or ) Phone Number တစ်ခုခုသို့ Verify code ပို့ပေးပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာတော့ သင်ပေးထားတဲ့ Recovery Email ( or ) Phone Number တို့ကိုမှတ်မိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီလိုအချိန်မျိူးမှာ အဆင်ပြေပြေဖြစ်စေရန် သင် Gmail account တစ်ခုကို Sign-up ပြုလုပ်ပြီဆိုရင်ဖုန်းကနေပဲဖြစ်ဖြစ် Computer ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီဆိုပါက Gmail account တစ်ခုရရှိလာပြီဆိုရင် Recovery Email နဲ့ Recovery Phone Number ဆိုတဲ့နေရာနှစ်ခုမှာ သင်မှတ်မိနိုင်မဲ့ Email address တစ်ခု – ဒါမှမပာုတ် သင့်မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ယောက်အမြဲတမ်းအသုံးပြုနေတဲ့ Email Adress တစ်ခုခုနဲ့ သင်အမြဲတမ်းအသုံးပြုတဲ့ Phone Number တို့ကို Recovery အဖြစ်ထည့်သွင်းအသုံးပြုကြပါလို့ အကြံပြုပေးလိုက်ရပါတယ်။